သင့်ဖုန်းကိုဝက်ဘ်ကင်မရာအဖြစ်အသုံးပြုနည်း | Gadget သတင်း
Ignacio Sala | | တယ်လီဖုန်း, ကင်မရာ
စမတ်ဖုန်းများ၏ကင်မရာများသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးတက်လာသော်လည်းလက်ပ်တော့များတွင်မူထုတ်လုပ်သူများသည်လုပ်ငန်းအတွက်မဟုတ်ပါ။ အများစုကမဟုတ်ရင် notebooks အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကို resolution နဲ့အရည်အသွေးပေးပါတယ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကမိုဘိုင်းဖုန်းများမှာတွေ့ခဲ့ရသလိုမျိုး။
အကယ်၍ သင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ပါက၊ အထူးသဖြင့်သူတို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါက၊ အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာဝက်ဘ်ကင်မရာတစ်ခုဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည် (Logitech သည်ဤအပိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်) ။ ဒါပေမယ့်သင်ပိုက်ဆံမဖြုန်းချင်ဘူးဆိုရင်၊ အခြားဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါပြီ သင့်ဖုန်း၏ကင်မရာကိုဝက်ဘ်ကင်မရာအဖြစ်သုံးပါ။
Play Store နှင့် Apple App Store နှစ်ခုစလုံးတွင် application အမြောက်အများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည် ငါတို့စမတ်ဖုန်းကို webcam တစ်ခုအနေနဲ့သုံးနိုင်အောင်သူတို့သေချာတယ်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းရန်လိုအပ်သောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သောဗွီဒီယို resolution ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်မပြုသူများထံမှ။ ရရှိနိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးနောက်၊ Windows အတွက်တစ်ခုနှင့် macOS အတွက်တစ်ခုသာရှိသည်။
1 အဘယ် application များကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ပါသလဲ။
2 သင့်ဖုန်းကိုဝဘ်ကင်မရာအဖြစ် Windows တွင်သုံးပါ
2.1.1 Android စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြင့်
2.1.2 အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်ဒ်၊
2.2.1 Android စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြင့်
2.2.2 အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်ဒ်၊
3 သင်၏ဖုန်းကို macos တွင် webcam တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုပါ
3.1.1 iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch သို့မဟုတ် Android စမတ်ဖုန်းများဖြင့်အတူ
3.2.1 Android စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြင့်
3.2.2 အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်ဒ်၊
အဘယ် application များကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ပါသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကို iPhone နှင့်ဖြစ်စေ Android မှစီမံခန့်ခွဲသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်စေ PC နှင့် Mac နှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သော DroidCam နှင့် Epocam application နှစ်ခုရှိသည်။ စတိုးဆိုင်နှစ်ခုလုံးတွင်အခြားအလားတူ application များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကို webcam တစ်ခုအဖြစ်ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရသော်လည်း သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုရှာနေတဲ့ function ကိုမပေးပါဘူး
applications နှစ်ခုလုံး၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ driver များနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သော application များမှတဆင့်၎င်းတို့လုပ်ဆောင်သည် ဖန်တီး ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများနှင့်ဝက်ဘ်ကင်မရာကိုချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပျူတာသို့၊ ဤနည်းဖြင့်ဗွီဒီယိုအရင်းအမြစ်ကိုထူထောင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်းပစ္စည်း (လက်ပ်တော့ပ်ပါက၎င်းစက်တွင်ပါ ၀ င်သောကွန်ပျူတာ) နှင့်စမတ်ဖုန်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ငါတို့သုံးတဲ့ application ကိုသူတို့ခေါ်မယ် DroidCam o Epocam.
DroidCam ကမည်သည့် application သို့မဟုတ် web service နှင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်းဒိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း Epocam သည် MacOS အတွင်းကန့်သတ်ချက်များစွာပေးထားပြီး၊ MacOS 10.14 Apple ၏ပေါင်းစပ်ထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြစ်သော Mojave ပိုမိုအားကောင်းတဲ့ runtime ကိုသုံးပါ (ကုဒ်နံပါတ်သွင်းခြင်း၊ ပြောင်းလဲနေသောဆက်စပ်စာကြည့်တိုက်များ (DLL) ကိုပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်မှတ်ဉာဏ်နေရာကိုခြယ်လှယ်ခြင်းစသည့်အသုံးချမှုအချို့ကိုရှောင်ရှားရန်) ။
ပိုမိုအားကောင်းသည့် runtime ကိုအသုံးပြုသော application များသည် application developer မှအတိအလင်းခွင့်မပြုပါက third party camera drivers များကို third party plugins များကိုမဖွင့်နိုင်ပါ သူတို့ကအက်ပလီကေးရှင်းတွေနဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျန်အပလီကေးရှင်းတွေနဲ့ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွေလုပ်တယ်။
DroidCam ကကျွန်တော်တို့ကို Android အတွက်ကွဲပြားတဲ့ဗားရှင်းနှစ်ခုပေးထားတယ်။ တစ်ခုကပေးတယ်။ တစ်ခုကပေးတယ်။ လခပေးသောကြော်ငြာသည်ဖျက်သိမ်းရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့ကိုပါခွင့်ပြုသည် ပုံရိပ်ပြောင်းခြင်း၊ မှန်ပြောင်းပြောင်းခြင်း၊ စမတ်ဖုန်း flash ကိုဖွင့်ပါ အလင်းရောင်တိုးတက်စေရန်အတွက်၎င်းသည်ပုံရိပ်ကိုချဲ့နိုင်သည်။ ပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်းဟုခေါ်သော DroiCamX သည် Play Store တွင် ၄.၈၉ ယူရိုဖြင့်ရှိသည်။
Epocam ကိုတီထွင်သူ Kinomi ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့မူကွဲနှစ်ခုကိုပေးထားသည်။ တ ဦး တည်းအခမဲ့နှင့်တ ဦး တည်းပေးဆောင်။ အခမဲ့ဗားရှင်းသည်ကြော်ငြာများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအပြင်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသော resolution ကိုပြုပြင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ Pro ဗားရှင်းတွင်ရရှိနိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး App Store တွင် ၈.၉၉ ယူရိုဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ နှင့် Google Play စတိုးတွင် ၅.၉၉ ။
သင့်ဖုန်းကိုဝဘ်ကင်မရာအဖြစ် Windows တွင်သုံးပါ
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် DroidCam အက်ပ်ကိုတပ်ဆင်ပါ ကျွန်ုပ်၏ Android ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှတဆင့်
DroidCam - ကွန်ပြူတာအတွက် Webcam
DroidCamX - PC အတွက် HD Webcam
၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းပြီးပါက၊ ဤလျှောက်လွှာအတွက်ဒရိုင်ဘာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဗားရှင်းဗားရှင်း၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောဒရိုင်ဘာများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည် ဤ website။ တပ်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော Windows ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍“ ဤစက်ဆော့ဝဲလ်ကိုသင်တပ်ဆင်လိုသလား” ပေါ်လာပါကထည့်သွင်းရန်ကိုနှိပ်ပါ။ ဗီဒီယိုနှင့်အသံနှစ်ခုလုံးအတွက်မောင်းနှင်အားများဖြစ်သည် လျှောက်လွှာစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်အဘို့အလိုအပ်သော။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ Android တွင် download လုပ်ထားသော application ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် IP address နှင့် access port (DroiCam Port) ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ desktop application ကိုရိုက်ထည့်ရပေမည်။ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ အခုကျွန်တော်တို့ Windows application ကိုဖွင့်ရတော့မယ်။
DroidCam application ၀ င်းဒိုးတွင်၊ Device IP နှင့် DroidCam Port ဒေတာကိုရိုက်ထည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာပြသထားတယ်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် IP အတွက် 192.168.100.7 နှင့် DroidCam Port အတွက် 4747 ဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတော့ Start ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှင့်ပြတင်းပေါက်အသစ်ဘယ်လိုဖွင့်သည်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာစမတ်ဖုန်း၏ကင်မရာကိုအသုံးပြုလိုသည့်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။
ကင်မရာအပိုင်းမှာတော့၊ input ကိုအရင်းအမြစ် DroidCam ရင်းမြစ် X အဖြစ်ရွေးချယ်ပါ (ပြသထားသည့်နံပါတ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမသက်ရောက်ပါ) ။
ဝက်ဘ်ကင်မရာတစ်ခုအနေဖြင့် DroidCam ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် application၊ Play Store တွင်သာရနိုင်သည် (Android application store) ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ application၊ webcam အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
Epocam အက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည် မိုဘိုင်း။ ရရှိနိုင်သောမူကွဲနှစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သောလင့်ခ်များကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
EpocCam - Mac နှင့် PC အတွက် Webcam
ရေးသားသူ: Corsair Memory, Inc
EpocCam Pro: Mac နှင့် PC အတွက် HD Webcam
နောက်တစ်ဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ရမည် ဒီကနေယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါ (o developer စာမျက်နှာသွားရောက်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင် application ဖွင့်သောအခါ Windows သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကင်မရာကိုအသိအမှတ်ပြုရန်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းတွင် application နှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုလိုသော application ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည် ဗီဒီယိုအရင်းအမြစ် Epocam အဖြစ်ရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏ IP လိပ်စာကိုပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် Epocam application ကို download လုပ်ပါ။ ရရှိနိုင်သောမူကွဲနှစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သောလင့်ခ်များကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Mac နှင့် PC အတွက် EpocCam Webcamအခမဲ့
ကွန်ပျူတာအတွက် EpocCam ဝက်ဘ်ကင်မရာ€ 8,99
နောက်တစ်ဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ရမည် ဒီကနေယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါ (o developer စာမျက်နှာသွားရောက်ခြင်း) ဒါကြောင့် Windows ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာကိုအသိအမှတ်ပြုပါ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင် application ကိုဖွင့်သောအခါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ရှိကင်မရာကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနှင့်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရန်လိုပြီးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန် Epocam ကိုဗီဒီယိုရင်းမြစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏ IP လိပ်စာကိုပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်၏ဖုန်းကို macos တွင် webcam တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုပါ
အက်ပလီကေးရှင်းများရှိရရှိနိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များထဲမှ၊ ကြော်ငြာအဖြစ်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောတစ်ခုတည်းသော application မှာ Epocam ဖြစ်သည်။ ငါတို့တစ်ခုတည်းရွေးစရာရှိတယ်.
iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch သို့မဟုတ် Android စမတ်ဖုန်းများဖြင့်အတူ
DroidCam သာဖြစ်သည် Windows နှင့် Linux အတွက်ရနိုင်သည် ယခုအချိန်တွင် developer သည် macOS အတွက်လျှောက်လွှာတင်ရန်အစီအစဉ်မရှိသေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကို Webcam အဖြစ်အသုံးပြုရန် Mac တွင်ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမှာ Epocam မှကမ်းလှမ်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အဓိကဖြစ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် Epocam application ကို download လုပ်ပါ။ ရရှိနိုင်သောမူကွဲနှစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သောလင့်ခ်များကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
နောက်ပြီး၊ ဒီကနေယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါ (o developer စာမျက်နှာသွားရောက်ခြင်းလျှောက်လွှာကိုစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကင်မရာကိုအသိအမှတ်ပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ iOS စမတ်ဖုန်းကိုသုံးနိုင်ရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာပေါ်တွင်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရုံဖြင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုလိုသည့်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ Epocam ဗီဒီယိုအရင်းအမြစ်ကိုရွေးပါ။
ရုပ်ပုံများကို Wi-Fi မှတစ်ဆင့်ကူးယူသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏ USB ဆိပ်ကမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ iPhone အတွက်ပေးချေထားတဲ့ version ကကျွန်တော်တို့ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပေးပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကင်မရာကိုကေဘယ်လ်မှတဆင့်ကူးယူခြင်း (ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ) ။
ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအသုံးချပရိုဂရမ်ကိုအသုံးမပြုမီစမ်းသပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည် Mac အတွက် Epocam Viewer app ကို download လုပ်ပါအောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် Mac App Store တွင်ရနိုင်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းအသုံးချပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်လုံခြုံရေးကင်မရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch အတွက်လျှောက်လွှာကိုရယူပါ Epocam ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်ဗားရှင်းနှစ်ခုလုံး၏လင့်ခ်များပါရှိသည်။
နောက်ပြီး၊ ဒီကနေယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါ (o developer စာမျက်နှာသွားရောက်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင် application ကိုဖွင့်သောအခါ macOS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကင်မရာကိုမှတ်မိစေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ iOS စမတ်ဖုန်းကိုသုံးနိုင်ရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာပေါ်တွင်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရုံဖြင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုလိုသည့်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ Epocam ဗီဒီယိုအရင်းအမြစ်ကိုရွေးပါ။
Epocam Pro သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့မှသာထုတ်လွှင့်မှုမြန်ဆန်ပြီး ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများမခံရပါ။ အခမဲ့ဗားရှင်းကသာကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် ဗီဒီယိုကို Wi-Fi မှတစ်ဆင့်လွှင့်ထုတ်သည်, ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ device ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အကယ်၍ ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းပါကပုံရိပ်ဖြစ်နိုင်သည် ငါတို့လိုချင်တဲ့ချောချောမွေ့မွေ့မပြပါနဲ့။ စမ်းသပ်မှုများကို Intel Core i5 နှင့် 16 GB RAM ပါသောကွန်ပျူတာတစ်ခုနှင့်2GB RAM ပါသော Intel Core4Duo တို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ရလဒ်သည်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာအမြန်နှုန်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်း၏ Processor ကို။ ကျွန်တော့်အနေနှင့်ကျွန်တော်ပထမ ဦး ဆုံးမျိုးဆက် Google Pixel (Snapdragon 820 မှစီမံခန့်ခွဲသည်၊ ၄ နှစ်အရွယ်ပရိုဆက်ဆာနှင့် ၄ GB GB RAM) နှင့် iPhone 4s (စျေးကွက်တွင်နောက်ထပ် ၄ နှစ် ရှိ၍) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်အချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ယက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်5GHz ကွန်ယက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော router ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုဤကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အကြံပြုလိုသည် ပိုမိုမြန်ဆန်သောဒေတာထုတ်လွှင့်မြန်နှုန်းကိုခံစားပါအကယ်၍ ပုံသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အေးခဲသွားသည်သို့မဟုတ်နှေးသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပါက၊
ပေးဆောင်ရသော DroidCam နှင့် Epocam ဗားရှင်းနှစ်ခုလုံးကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများကိုအခမဲ့ဗားရှင်းတွင်မရရှိနိုင်ပါ ကင်မရာ၏ resolution ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ပုံရိပ်ကိုလှည့်ခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ အလင်းရောင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကိရိယာ၏ flash ကိုဖွင့်ခြင်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
လျှောက်လွှာနှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏မိုက်ခရိုဖုန်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၏မိုက်ခရိုဖုန်းကိုသုံးပါ အဲဒါက ... ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို Windows တွင်သာထည့်သွင်းထားသည့် desktop ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုလိုပါကဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင် macOS အသုံးပြုသူဖြစ်ပါကသင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်မိုက်ခရိုဖုန်းပါသည့်နားကြပ်ကိုအသုံးပြုရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » သင့်ဖုန်းကိုဝက်ဘ်ကင်မရာအဖြစ်အသုံးပြုနည်း